Anatin’ny fibahanana ny aterineto ao Kashmir: Tatitra an-dahatsary niarahana tamin’ireo Kashmiri mpianatra idonan’ilay krizy · Global Voices teny Malagasy
"Ahoana no hahafahanay fanadinana nefa tsy mahita nydatin'ny adina an-tambajotra?"
Voadika ny 29 Novambra 2019 17:11 GMT
Pikantsary avy amin'ilay tatitra an-dahatsary avy ao Kashmir, an'i Pir Azhar.
Ity dia lahatsoratra navoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, vondrompiarahamonin'ireo fikambanana media efa nahazo loka iraisampirenena, miorina ao India. Ny dika navoaka eto ambany dia tafiditra anatin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
Tamin'ny 5 Aogositra 2019, notapahana daholo ny fidirana tamin'ny finday, ny antso an-tariby, ny tambajotra aterineto, narahana fanidiana tanteraka ny faritra Kashmir ambany fiadidian'i India, taorian'ny nanatsoahan‘ny governemanta indiàna ny Artikla 370 ao amin'ny lalàm-panorenana indiàna milaza ny fanomezana sata mizaka tena an'io faritra io .
Taorian'ny efa ho volana roa mahery, naverin'ny governemanta tamin'ny ampahany ny fanakanana ny fifandraisana. Naverina ny fahafahana miditra aterineto tany amin'ireo andrimpanjakana sasantsasany ary nisy didy vaovao manery ireo orinasa hamoy ny momba ny fiainany manokana sady tsy hampiasa ny tambajotra sosialy raha toa tian-dry zareo ny hampiasa ny aterineto. Ireo olontsotra kosa anefa tsy mbola afaka niditra aterineto.
Vakio bebe kokoa: Ao anatin'ny krizy ao Kashmir (amin'ny teny anglisy)
Tao anaty tatitra an-dahatsary iray an'i Pir Azhar, iraky ny vondrompiarahamonina Video Volunteers avy ao amin'ny distrikan'i Kupwara any Kashmir, zarainy fa hoe mandona mafy an'ireo Kashmiri mpianatra miisa 48.000 ilay fandraràna ny aterineto, izy ireo izay toa ao anaty fiatrehana ny fanadinam-panjakana isankarazany ankehitriny. Marobe ireo mpianatra no miaina anaty haizina raha ireo daty tokony hiatrehany ny fanadinana no resahana.
Noho ireo “Fepetra fiarovana” noraisina taorian'ny nanafoanana ilay Sata Manokan'i Jamu sy Kashmir voalazan'ny Andininy faha 370 amin'ny Lalàm-panorenna indiàna, nakatona ny sekoly ary tsy afaka manomana feno ny fanadinana ireo mpianatra. Manahy momba ny fahafahana hiatrika ireo fanadinana ho avy ry zareo.
Ity ny fandikana ho soratra ny voalaza ao anatin'ilay tatitra an-dahatsary:
Usama Farooq, mpianatra: Nanomboka tamin'ny 5 Aogositra 2019 ka hatramin'ny androany, tsy misy fifandraisana aterineto na sekoly nisokatra. Na ohatra aza izahay ka tsy manahy momba ireo sekoly ary mahavita mandeha any aminà toeram-pianarana [tsy miankina], nakatona ihany koa ireny toerana ireny. Nahilika tsy hahazo aterineto izahay. Afaka mifofotra tsy mandalo ny sekoly ihany izahay [indraindray] saingy amin'ny fomba ahoana no hahatafavoaka velona anay amin'ilay toko faha 144 [Fandraràna ny fivorivoriana tsy nahazoana alàlana – Toko faha 144 amin'ny Lalàna momba ny Heloka Bevava (CrPC) tamin'ny 1973]?
Mpanontany (Pir Azhar): Inona no hevitrao? Afaka hahazo isa tsara hifindràna kilasy ve ianao mandritra ireo adina hataonao?
Pir Umar, mpianatra: Ahoana no hifindrànay? Tsy azonay antoka akory hoe 100% amin'izay nianaranay ve no nalaina avy ao anatin'ny fandaharampianarana sa tsia. Ahoana no ahafahanay [fanadinana] raha 32% fotsiny no nianaranay?
Usama Farooq, mpianatra: Ahoana no hahafahany [fanadinana] raha tsy vitanay hatramin'ny farany akory ny fandaharam-pianarana nefa ny 100% amin'ny fandaharampianarana no ho hita ao anaty lazaadina? Olana marobe no atrehanay noho io zavatra io.
Malik Dawood, mpianatra: Fa maninona izahay no mandeha an-tsekoly amin'izao fotoana izao? Eto izahay satria efa nivoaka ny datin'andro momba ny fampiasàna atao an-tambajotra (fanadinana atao an-tambajotra). Tsy nisy na inona na inona fantatray ny momba an'io [fanafoanana ny Toko faha 370 tao Jammu sy Kashmir]. Andro roa na telo taorian'ny nanombohan'ilay fampiasàna ety anaty aterineto izahay vao tonga satria ny mpampianatra anay no nilaza taminay hoe efa nivoaka ny datin'andro fanaovana ny fampiharana. Raha nandeha tsara ny fifandraisana tamin'ny finday, mety mba avy any an-kafa tany izahay no nandre momba ireo fampiasàna ireo. Noho ny fanapahana ny fifandraisana, tsy nahafantatra momba ireo fampiasàna atao ety anaty aterineto izahay.
Pir Umar, mpianatra: Nandritra ny volana roa, na mihoatra noho izany, nofoanan'ny governemanta indiàna ny Artikla 370 tao amin'ny Lalàm-panorenna [indiàna] , dia nitondra miaramila 1.200 lahy teto izy ireo. Tsy afaka nandeha an-tsekoly izahay taorian'izany. Natahotra ireo ray aman-dreny sao tsy ho tafody am-pitoniana avy any an-tsekoly ny zanany.
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Subhashish Panigrahi
Nanampy tamin'ny famoahana ny dika amin'ny teny malagasy i Avylavitra